राजपा-समाजवादी एकता | रुपान्तरण
२३ मंसिर २०७६, सोमबार १७:३०
काठमाडौं । मंसीर १४ मा सम्पन्न उपनिर्वाचन अघि पार्टी एकता गर्न कम्मर कसेका राजपा र समाजवादी पार्टी निर्वाचन नतिजा आएसँगै सेलाएका छन् । उपनिर्वाचनमा यी दुई दलले सात स्थानमा वडाअध्यक्षमा जित हासील गरेपनि औपचारिक एकताका लागि जारी राखेको निरन्तरको संवाद र वार्तामा अल्पविराम लागेको छ ।
राजपामा दलका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा बनेको चार सदस्यीय वार्ता टोली समाजवादी पार्टीसँग एकताका लागि निरन्तर प्रयासमा रहेका छन् । समाजवादी दलका तर्फबाट संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई स्वयम् पार्टी एकता लागि हतारिएका छन् । वैकल्पिक शक्ति बनाउने महत्वकाक्षां बोकेर पार्टी एकीकरणका लागि डा. भट्टराई निरन्तर लागि परेको दलका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठको दाबी छ ।
राजपा अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा वार्ता टोली संयोजक राजेन्द्र महतोले एक महिनाभित्र पार्टी एक हुने पटक पटक बोल्दै आएका छन् । एकताका लागि सैद्धान्तिक विषयहरु टुंगो लागे पनि प्राविधिक विषयमा सहमति हुन नसकेको दुबै दलका शिर्ष नेतृत्वको दाबी छ ।
उपनिर्वाचनमा एक्ला एक्लै उम्मेद्वारी दिएका यी दुई पार्टी एकतामा समस्या देखा परेको जनतामा वुझाइ छ । मधेश राजनीतिका जानकार डा. राजेश अहिराज दुई पार्टीको एकता, समयको माग र आवश्यकता अनुरुप हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव उपनिर्वाचनमा प्रदेश २ का अधिंकास स्थानमा मिलेर चुनाव लड्न नसक्नाले जनतामा एकताको सकारात्मक भावना विकास गराउन दुबै पार्टी चुकेको स्विकार गर्छन् ।
‘प्रयास हामीले गरेका हौं, महोत्तरीको दुई ठाउँमा सफल भयौं अन्य स्थानमा पनि मिलेर अघि बढ्न धेरै मिहिनेत गरेकै हो’, उनी भन्छन्–‘सकारात्मक भावनाको विकास जनतामा गराउन नसक्नु कमजोरी भयो , यसको अर्थ एकता जस्तो महान अभियानमा यसले त्यत्रो ठूलो नकारात्मक भूमिका खेल्दैन ।’
हैसियत र पदको प्रश्न !
राजपा महासचिव मनिष सुमन पार्टी एकीकरण अपरिहार्य भएको बताउँछन् । उपनिर्वाचनमा सँगै लड्ने प्रयास भएपनि नेता तथा कार्यकर्ताहरुको केही स्वार्थको कारण संभव नभएको उनको तर्क छ । राष्ट्रपतीय व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र राज्यसञ्चालन प्रणाली लगायतका केही विषयमा फरक मत रहे पनि मुख्य विषय संविधान संशोधनमा दुई पार्टी एक ठाउँमा उभिएका छन् । पार्टीको नाम र झण्डाको विषयमा सहमति भइसकेको वुझिएको छ । पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी र झण्डा राजपाको राख्ने पहिलो चरणको सहमति भएको छ । तर, कुन नेतालाई कुन पद दिएर पार्टी एकता गर्ने भन्ने विषयमा समस्या भएको बताइन्छ ।
एकतामा कसलाई अध्यक्ष दिएर वा कुन मोडलबाट एकता गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषय जटिल बन्दै गएको छ । प्राविधिक समस्या उपनाम दिइएको यो विषय सुल्झाउन दुबै दललाई समस्या र चुनौती थपिएको छ । राजपा संयोजक महन्त ठाकुरलाई सर्वमान्य नेता बनाएर अघि बढ्ने कि अध्यक्ष दिएर, डा. भट्टराई वा कार्यकारिणी अध्यक्ष यादवलाई अध्यक्ष बनाएर अघि बढ्ने भन्ने समस्या बढेको छ ।
यस्तै राजपाबाट अन्य अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एकीकरणका लागि वार्ता टोलिको कमाण्ड सम्हालीरहेका राजेन्द्र महतो , महेन्द्रराय यादव, शरतसिंह भण्डारी , राजकिशोर यादव, अनिल झाको हैसियत र पदको प्रश्न उठेको छ । यता समाजवादीका अशोक राई , राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेता कुन हैसियतमा बसेर काम गराउने भन्ने विषयले दुई पार्टीमा विवाद सृजना हुने अवस्था आउने संभावना देखिएको छ ।
प्राविधिक विषय भनेको भागवण्डाको विषय हो ? भन्ने रुपान्तरणको प्रश्नमा राजपा महासचिव मनिष सुमन शिर्ष नेतृत्वको भागवण्डा मात्र समस्या नभएको बताउँछन् । उनी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा मेरो हैसियत र पद के हुने भन्ने डर र चिन्ताले एकीकरण प्रकृया रोकिएको बताउँछन् । राजपामा अध्यक्ष मण्डल र समाजवादीको केही नेताहरुको भागवण्डा मात्र मिलाउने हो भने एकता दिर्घकालीन नहुने उनको तर्कछ । ‘राजपामा महन्त ठाकुरदेखि वडा सदस्य सम्म, उपेन्द्र तथा डा. भट्टराई देखि तल्लो तहको कार्यकर्ता सम्म सबैलाई समान हैसियतमा व्यवस्थापन गरेर मात्र एकता गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्–‘उचित समायोजन नभए दिर्घकालीन नतिजा राम्रो आउँदैन ।’
यता समाजवादी पार्टीका महासचिब गंगानारायण श्रेष्ठ नेतृत्व व्यवस्थापनको विषय मात्र प्रमुख नभएको बताउँछन् । पार्टी एकता गर्ने भएपछि समग्र प्याकेजमा सोचेर समाजवादीले वार्ता र छलफल अघि बढाएको उनको तर्क छ । बैचारीक राजनीतिका विषय, संगठनात्मक विषयको जटिलता , नेतृत्वको बाँडफाड तथा अन्य प्राविधिक विषयमा समाजवादी उदार भएर छलफल गरिरहेको रुपान्तरणसँगको संवादमा उनले बताए । ‘चाडैं राजपासँग एकता वार्ता गर्छौ र यो विषयलाई तार्किक निष्कर्शमा पुर्‍याउँछौं’, उनले भने–‘मलाई विश्वास छ नेतृत्वको विषय जटिल बन्दैन, व्यवस्थापन सजिलै हुन्छ ।’
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव समय अभावका कारण यो विषयमा गहन छलफल हुन नपाएको दाबी गर्छन् । उनी एकद्वार प्रणाली र एउटै अध्यक्ष बनाएर अघि बढ्नु पर्ने तर्क गर्छन् । ‘नेतृत्वहरुको व्यवस्थापन सम्मानजक हुने कुरामा दुई मत छैन, संसदमा दुबै पार्टीको संख्या बराबर छ ’ उनी भन्छन् ।
उपेन्द्रको सत्ता मोह र एकता
राजपाको वटमलाइनमा रहेको समाजवादीको सत्ता वहिर्गमनले एकतामा ‘ट्वीस्ट’ आउने संभावना बढेको छ । एकता प्रकृया अन्योलपूर्ण हुनुमा समाजवादी पार्टीको सत्ता मोहले समस्या सृजना गरेको छ । विशेषगरेर समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सत्ता मोह निकै धातक बन्ने संभावना बढेको छ ।
पार्टी एकता र संविधान संशोधन वा पुर्नलेखनमा दवाव दिने उद्देश्यले संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई समेत पार्टीको सत्ता वहिर्गमनको पक्षमा देखिएका छन् । तर, मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्दा समेत सत्ताघटक आफूलाई नसोधी प्रम केपी शर्माको राजनीतिक डिजाइनमा परेका उपेन्द्र यादवले यसलाई सहर्ष स्विकार गरेका छन् । आफ्नो पार्टीबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको पद गुम्दा समेत उनी चुपचाप बसेका छन् । संविधान नमानेका उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयको जिम्वेवारी दिइदा समेत गुपचुप शपथ खाएर सम्हालीरहेका छन् ।
राजपा महासचिव मनिष सुमन समाजवादीले सरकार छोड्नु पर्ने अडान राख्छन् । यस्तै अध्यक्ष मण्डलको सदस्य महेन्द्र राय यादव सरकार छाडेर समाजवादीले एकताको वातावरण चाडो भन्दा चाडो बनाउनु पर्ने बताउँछन् । सरकार छाड्नुपर्ने अडान नभए पनि समाजवादी सरकारमा राजपा सत्ता बाहिर बसेर एकताको जिम्वेवारी पुरा गर्न समस्या हुने यादवको तर्क छ ।
समाजवादी दल ढिलो चाडो सरकार छाड्ने मनस्थितीमा पुगेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले समाजवादीलाई प्रयोग मात्र गरेको र उपेन्द्रको स्वार्थ मात्र पूर्ती गरेकाले डा. भट्टराईमा असन्तुष्टि बढेको छ । ‘अहिले सरकार छाडे संविधान संसोधन गर्छु भन्दा भन्दै समाजवादी भाग्यो भनेर प्रम ओलील प्रचार गर्नेछन्, यहीँ कारण केही दिन सरकारमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ,’स्रोत भन्छ ।
यता, सपा महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठ सरकार छाड्नुपर्ने राजपाको अडान रहेको स्विकार गर्छन् । उनी सत्तामा बस्ने र वहिर्गमन हुने विषयले एकता प्रकृयामा समस्या नपर्ने दाबी गर्छन् ।
अस्तित्व विहीन क्षेत्रिय राजनीति !
नेताहरु उत्पिडनमा परेका जनताहरुलाई अधिकार दिलाउन एकता आवश्यक भएको दाबी गर्छन् । संविधान संसोधनको वटमलाइनमा सहमत भएका यि दलहरु पछिल्लो समय जनताले निर्वाचनबाट दिएको जनमतले झस्किएका छन् । पटक पटक मधेशी जनता र उनिहरुको ‘सेन्टिमेन्ट क्यास’ गरेर राजनीतिक एजेण्डा सुरक्षित गरेका उनीहरुले भविष्य असुरक्षित देखेर एकताको बाटो राजेको मधेश राजनीति जानकार डा. अहिराजको दाबी छ ।
यस्तै पटक पटक वैकल्पिक शक्तिको रटान छाटिरहेका डा. भट्टराईलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा ठाउँ बनाउन तथा मधेशको भावनालाई पार्टीमा समावेश गर्न क्षेत्रिय राजनीतिमा होमिएका दलहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउने प्रयास गरेका हुन् । मधेश बाहेक अन्य समुदायमा आफ्नो पहिचान पहाड तथा हिमाल आफू र आफ्नो दललाई स्थापित गर्ने प्रयासमा जुटेका मधेशवादी दल राजपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि अवसर मिलेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
‘मुद्दालाई थाति राख्ने र राज्यसत्तालाई तर्साइ राख्ने अर्थात् सत्तामा गइराख्ने उहाँहरुको चरित्रले मधेश केन्द्रित दल भएर बस्ने खासै उहाँहरुको लामो भविष्य छैन’, डा. अहिराज भन्छन्–‘धार धरातल राजनीतिक सिद्धान्त अनि विमर्शका आयामहरु कुनै विषय दुई दलको मिल्दैन भने एकिकरणको औचित्य पनि छैन ।’